Lumbini KhabarNews Portal Of Lumbini | सडक संरक्षण कसले गर्ने ? नालीमा पहिरो सडकमा रुख - Lumbini Khabar
सडक संरक्षण कसले गर्ने ? नालीमा पहिरो सडकमा रुख
गुल्मी, २३ कार्तिक
गुल्मीको रिडीदेखि सिमलटारीसम्म ७३ किमी सडक कालोे पत्रे भएको छ । रुरु क्षेत्र, छत्रकोट, गुल्मी दरवार, रेसुंगा, इस्मा र मालिका भएर मुख्य सडक कालोपत्रे भएको छ । रिडी–रुद्रवेणी–वामी सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा पनि सडक पक्की हुने काम भइरहेको छ । भने केहि ग्राभेल र स्तरउनन्ती गरिएका सडक पनि छन् । सुरुमा जसले निर्माण गरेपनि ती सडक स्थानीय तहका महत्वपूर्ण संरचना हुन । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले यो बिषयमा चासो दिएका छैनन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सयौ सवारीका साधन सदरमुकाम तम्घास प्रवेश गर्छन् । भने सोहि संख्यामा गाउँ पुग्छन् । पहिरोले थुप्रै ठाउँ पक्की सडकनै बगाएको छ । कतिपय स्थानमा पहिरो खसेर सडक साँघुरो बनाएको छ । त्यो मात्रै छैन, नाली पुरिएर पानी छिर्दैन । झाडी र रुखले आधा सडकनै ढाकेपछि दुर्घटनाको जोखिम प्रत्येक सेकेण्डमा छ । घुम्ती सडकमा झाडी र नाली सफा नगरेको सवारी साधन संचालनमा निकै समस्या भएको सवारी चालक अनिल ठकुरीले बताए । उनले यो समस्या बर्षौदेखि कायम भएपनि समाधानको पहल कतैबाट नभएको गुनासो गरे । ‘कुन बेला के हुन्छ पत्तै छैन, पक्की सडक तल पनि खसेर छैन आधा भागसम्म नाली र झाडी छ,’उनले भने,‘कुनै सरकार र कार्यालयलाई चासो भएन् ।’
रिडी–तम्घास–सिमलटारी जिल्लाको मुख्य पक्की सडकखण्ड हो । घुम्ती धेरै भएकाले कैयौ पटक ठुला दुर्र्घटना पनि भए । सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न केहि बर्ष पहिले सडक छेउँमा राखिएका ऐना पनि अहिले भेटिदैनन् । साँघुरो र घुमाउरो सडकबाट हुने जोखिमका बिषयमा जिम्मेवार निकाय मौन छन् । जसका कारण अप्रिय घटना घटेपछि मात्रै जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिती रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरिक्षक जगन्नाथ पाण्डेयले बताए । उनले सडक र दुर्घटनाको जोखिमका बिषयमा जनप्रतिनिधी, नेता र सडक निर्माण गर्ने कार्यालयहरुको ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले चासो नदिएका कारण समस्या बल्झी रहेको रहेको बताए ।
सडक संरक्षण गर्ने दायीत्वका बिषयमा स्थानीय तह र सडक कार्यालयबिच आआफ्नै तर्क छन् । रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले सडक निर्माण गर्ने कार्याहरुकै संरक्षणको दायित्व पनि भएकाले आफुहरुले स्थानीय तहका बाहेक अरु सडकको मर्मत संभार गर्ने बजेट आफुहरुसंग नहुने बताए । तीन वटै तहका सरकारले सडक निर्माण गरिरहेकाले कोहि पनि अरुलाई आरोप लगाएर पन्छिन नहुने भुसालको भनाई छ । भौतिक पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपीराज पुनले सडक संरक्षणको स्पष्ट नीति नभएकै कारण समस्या भएको बताए ।
उनले नयाँ सडकको सन्दर्भमा एक बर्षसम्म निर्माण कम्पनीकै दायित्व भित्र सडक संरक्षण पर्ने र त्यसपछि मर्मतमा बजेट आए मात्रै आफुहरुले काम गर्ने पुनको तर्क छ । उनले आफुहरुले आठ वटा सडकको काम गरिरहेकाले बजेटको व्यावस्था भएको ठाउँमा लेन्थवर्कर मार्फत नाली र झाडी सफा गर्ने काम भइरहेको बताए ।
सडक सरचनाको सरक्षण गर्ने कुरा एउटा उदाहरण मात्रै हो । कैयौ सार्वजनिक सम्पति संरक्षणको अभावमा दुरुपयोग र व्याबहारिसे बनेका छन् । यो बिषयमा नजिकैको स्थानीय सरकार पनि सचेत छैन् । सार्वजनिक सम्पती जुन तह र कम्पनीले निर्माण गरे पनि नजिकैको सरकार भएकाले सवैसंग समन्वय र बजेटको व्यावस्था गरेर नियमित मर्मत संभारको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने नागरिक समाजका संयोजक पदम पाण्डेयले बताए । ‘सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र हेरेर उम्कन मिल्दैन,’उनले भने,‘स्थानीय तहले बजेटको समन्वय गरेर नियमित मर्मत संभार गर्नुपर्छ ।’